မြန်မာရေလုပ်သားများကို ထိုင်းစစ်တပ် ဝင်ဖမ်း | ဧရာဝတီ
သန်းထိုက်ဦး| November 15, 2012 | Hits:2,754
2 | | ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာပြည်သား အများစုမှာ ရေလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းနှင့် ရာဘာ ခြံတို့တွင် ဖြစ်သည် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာပြည်သား ၁၀၀ ခန့် ယမန်နေ့က ဖမ်းဆီးခံရကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းရေတပ် အာဏာပိုင်များက အဆိုပါ မြန်မာပြည်သားများ နေထိုင်လျက်ရှိသည့် ဖန်င ခရိုင် အတွင်းရှိ ထလမုကျေးရွာကို ပိတ်ဆို့ပြီး ဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း အခြေစိုက် ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်း ဒါရိုက်တာ ဦး ထူးချစ်က ပြောသည်။
“ဖမ်းတာကလည်း တကယ့် စစ်ဆင်းရေးကြီးတခုလို ရွာကို ၀ိုင်းပြီးတော့ ဖမ်းတော့ လူတစ်ရာလောက် အဖမ်းခံလိုက် ရတယ်”ဟု ဦးထူးချစ်က ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုသည်။
ထိုင်း ရေတပ် အနေနှင့် ထလမုကျေးရွာမှ လှေများကိုပါ ကမ်းနားကပ်ခိုင်း၍ ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးသည့်အတွက် ရေလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များကြား ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် အလုပ်သမားများကိုလည်း ပြန်လွှတ်ပေးရန် ရေလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ က တောင်းဆို ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“လှေပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ထိုင်းတွေ အကုန်လုံး ဆန္ဒပြတယ်၊ တအိမ်တယောက် ထွက်ဆိုပြီးတော့ လမ်းတွေကို ကားတွေနဲ့ ပိတ်ထား ပြီးတော့ စစ်တပ်တွေ မ၀င်ရအောင် အဲဒီလောက် အထိလုပ်တာ၊ သူတို့က မြန်မာတွေကို ဖမ်းမှာစိုးရိမ်လို့”ဟု ဦးထူးချစ်က ဆက် ပြောသည်။
ဦးထူးချစ်၏ ပြောပြချက်အရ ထလမုကျေးရွာတွင် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေသူ မြန်မာပြည်သားအနည်း ဆုံး ၄၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး တရားဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ ရှိသကဲ့သို့ အများစုမှာ တရားမ၀င် နေထိုင်သူများကြောင်း ဆိုသည်။
ယနေ့ နောက်ဆုံးရရှိသောသတင်းများအရ တရားဝင် အလုပ်သမား လက်မှတ်ရှိပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် မြန်မာပြည်သားများ ကို ပြန်လွတ်ပေးပြီး တရားမ၀င် နေထိုင်သူများအတွက် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရန် ထိုင်းအာဏာပိုင်များနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
အဖမ်းခံရသည့် မြန်မာပြည်သားများကို ဖန်ငမြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (လ၀က) အချုပ်တွင် ထိန်းသိမ်းထား သည်။
ထလမုကျေးရွာကို ၀င်ရောက် ဖမ်းဆီးသည့် အကြောင်းအရင်းကို မသိရသော်လည်း ရေလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များနှင့် ထိုင်းအာဏာပိုင်များ ကြား မြန်မာပြည်သားများက ဓားစာခံဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း ဦးထူးချစ်က ရှင်းပြသည်။
“အမှန်ဆိုလို့ရှိရင် မှတ်ပုံတင်လုပ်ဖို့ သူဌေးတွေ ကိုယ်တိုင် အားပေးထားတယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဒီပြဿနာတွေ တက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး”ဟု ဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာပြည်သား အများစုမှာ ရေလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရာဘာ ခြံတို့တွင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။
အလုပ်သမားများ ဖမ်းဆီး အရေးယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း တရားမ၀င်နေထိုင်သည့် မြန်မာ၊ လာအိုနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံသားများကို ဖမ်းဆီးပြီး နေရပ်ရင်း ပြန်ပို့မည့် အရေးယူမှု တရပ်ကို လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း စတင် ပြုလုပ် မည် ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်း အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနက ပြောကြားထားသည်။
ထိုင်း အစိုးရ အနေနှင့် Nationality Verification Process (NVP) နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် အရ နောက်ဆုံး သတ်မှတ် ပေးထားသော ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ မတိုင်ခင် မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်သူများကို အရေးယူမှု ပြုလုပ် သွားမည်ဟု ထိုင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီး Padermchai Sasomsap က ပြောကြောင်း ထိုင်း အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာန အင်တာ နက် စာမျက်နှာတွင် ယမန်နေ့က ဖော်ပြထားသည်။
ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအတွက် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး အစီအစဉ်ကို ယခုနှစ် ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက် နေ့ အထိ ၆ လ သက်တမ်းတိုးရန် ထိုင်း အစိုးရအနေနှင့် ခွင့်ပြုပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အလုပ်သမား လက်မှတ် ပြုလုပ်ထားသူတိုင်းသည် ယာယီ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပြုလုပ်ရန် အတွက် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး လာအိုနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံသားများ အတွက် ၂၀၀၆ ခုနှစ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အတွက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြ ဂုတ်လ အတွင်း၌ စတင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ အနှံ့ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အိမ်ဖော်၊ ရေလုပ်သား၊ စားသောက်ဆိုင် စသည့် လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာ ပြည်သား စုစုပေါင်း ၂ သန်းမှ ၄ သန်း အထိရှိနိုင်ကြောင်း အလုပ်သမားအဖွဲ့များက ခန့်မှန်းထားကြသည်။
တရားမဝင် ဝင်လာသည့် ဘင်္ဂါလီ ၁၀၀ ကျော်ကို ထိုင်းက ဖမ်းဆီး
ထိုင်းအစိုးရက တရားမ၀င်နေထိုင်သူများ အတွက် တနှစ်သက်တမ်း လက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Shweitae November 15, 2012 - 10:57 pm	Local trust good guests.
ရွှေ့ပြောင်း ရခိုင်မျိုးနွယ်စုများကို နိုင်ငံသားပေးရန် ၃ နှစ် စောင့်ကြည့်မည်
၀ှိုက်ကတ် ပြန်အပ်သူများကို စိစစ်၍ ကတ်အမျိုးအစား ၄ မျိုး ပြန်ထုတ်ပေး
White Card ၄ သိန်းကျော် ပြန်အပ်ပြီး
White card မဲပေးခွင့် ပယ်ဖျက်ရေး ရန်ကုန်တွင် ဆန္ဒပြ
White card မဲပေးခွင့်သည် အနောက် အင်အားကြီး နိုင်ငံတချို့ ဖိအားကြောင့်ဟု ဆို
“White Card ကိုင်တာနဲ့ နိုင်ငံသား ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောတော့ မဟုတ်ပါဘူး”
White Card ကိုင်ဆောင် ထားသူများ မဲပေးခွင့်ကို ဆန္ဒပြမည်